अस्ट्रेलियामा रहेका कोरोना संक्रमित सबै नेपालीको रिपोर्ट नेगेटिभ – Online Nepal
अस्ट्रेलियामा रहेका कोरोना संक्रमित सबै नेपालीको रिपोर्ट नेगेटिभ
April 10, 2020 196
काठमाडौं, २८ चैत । अस्ट्रेलियामा कोभिड १९ संक्रमित सबै नेपालीहरुको अन्तिम रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । अस्ट्रेलियाको क्यान्बेरास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका कोरोना संक्रमित सात जना नेपालीहरुको अन्तिम रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ।
दुई साता अगाडि अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा ३ जना र सिड्नीमा चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । अहिले उनीहरु निको भएर पनि आफ्नो दैनिकीमा फर्किइसकेका दूतावासले जनाएको छ ।यस अगाडि पनि तम्मानियामा एक नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो, उनी पनि संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् ।
दूतावासका अनुसार अस्ट्रेलियामा करिब एक लाख २० हजार नेपालीहरुले बसोबास गर्दै आएका छन् । कोरोनजा भाइरसको संक्रमण भएका नेपालीबारे सम्बन्धित अवैतनिक दूतावास र एनआरएनलगायतका संस्थासँग समन्वय गरेर दैनिक रुपमा जानकारी लिने गरेको दूतावासले जनाएको छ ।अस्ट्रेलियामा करिब ५४ जना नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । वल्र्डोमिटर्सका अनुसार अस्ट्रेलियामा हालसम्म ५३ जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्, भने संक्रमितको संख्या ६ हजार २ सय तीन पुगेको छ ।
Prevलकडाउन हटेको झै गरे दाङको तुलसीपुर बजारमा उर्लिए उपभोक्ता
Nextकोरोनाको खोप कहिले बन्छ ? कोरोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? हेर्नुस अत्ति महत्वपुर्ण भिडियो हेर्नुस
यस्ता १० काम गर्भमा हुँदै शिशुले गर्छन्